ရေခြားမြေခြားရောက် ယောင်္ကျားသားတို့ သတိပြုစရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရေခြားမြေခြားရောက် ယောင်္ကျားသားတို့ သတိပြုစရာ
ရေခြားမြေခြားရောက် ယောင်္ကျားသားတို့ သတိပြုစရာ
Posted by search123 on Oct 8, 2010 in News | 8 comments
သဘောင်္သား ဆိုတာ မိသားစုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွါနေရတဲ့ သူတွေပါ။
သစ္စာတရား ကို တန်ဖိုးထားသူတွေကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း မိသားစုကို လွမ်း..ကမ်းကပ်ရင် ဖုန်းဆက်ပေါ့…
အဲ သစ္စာတွေ ဘာတွေ သိပ်မစဉ်းစားတဲ့ သူမျိုးကျတော့ လည်း ကမ်းကပ်ရင် ကဲပေါ့…
ဒါက ပင်လယ် ထဲက သူတို့ ဘ၀..
အိမ်က မိန်းမ ကရော ..အိမ်မှု ကိစ္စလုပ်ရင်း အချိန်ကုန်..လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရင်း အချိန်ကုန် …
ဒါက ရိုးရှင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့…
ဒီနေရာမှာ ပြောပြချင်တာက ယောင်္ကျား အဝေးရောက်နေ တုန်း ကဲကြတဲ့ အကြောင်းလေးပါ..
အရင်တုန်း က တော်တော် ရင်းနှီး ခဲ့ တဲ့ မိသားစု တစ်စုရှိ ပါတယ်။
အဲဒီ အိမ်က ယောကျာင်္း လုပ်တဲ့သူ သင်္ဘော မလိုက်ခင် အထိပါ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက် ယောကျာင်္း လုပ်တဲ့သူ သင်္ဘောလိုက်တဲ့ အချိန်က စလို့ အဲဒီ အမျိုး သမီး ရဲ့ အရှုပ်တော် ပုံ စတော့တာပါပဲ။
အသက် က အခုဆို ၄၇ လောက် ရှိပြီ…
တွေ့သမျှယောကျာင်္း တိုင်းကို အထာပေး..အိမ်ကိုခေါ်လာ..ညရော နေ့ရော မရှောင်ပါဘူး…
သားလုပ်တဲ့ သူကလည်း ရှောင်ပေးတယ်.
အဖေ ပြန်လာတော့ အမေ နဲ့ သားပေါင်းပြီးလိမ်ကြတယ်..
ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့ သူ ပြန်လာရင် အဲဒီ အမျိုးသမီး အိမ်ထဲ က အိမ်ပြင် လုံးဝ မထွက်…တကယ့် ဗိုင်းကောင်း ကျောက်ဖိ …
ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့ သူ အပြင်ထွက်ရင် ဘယ်နေရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်တယ်..
ဘေးလူတွေ သူ့ အကြောင်းပြော လိုက်မှာ စိုးလို့…
ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့ သူ က ရိုးရိုးသဘောင်္သား ခပ်တုံးတုံး။
ဒီ အမျိုးသမီး က သူနဲ့ ဖြစ်ထားတဲ့ သူတွေ ကိုပါ ယောင်္ကျား နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သေးတာ။
အခု ထိ ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူ က မသိတာ အံ့သြမိပါတယ်.
ထူးဆန်းတာ က သူ့ယောကျာင်္း အလုပ် အဆင်မပြေလို့ company ခဏခဏ ပြောင်းရပါတယ်။
သူ့ကိုလည်း ဘယ်သူမှ အဖက်မလုပ်ကြတော့ပါ။
သဘောင်္သားများ၊ ယောကျာင်္းများ အားလုံး ဒီလို အမျိုးသမီးမျိုး နဲ့ မတွေ့ကြပါစေနဲ့…
ကြားကနေ အယူသီးတဲ့အကြောင်းလေးဝင်ပြောပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဖီးလ်းနဲ့ ကိုယ်ပါနော်
ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာ ဆင်ဖမ်း (ဆင်ဖမ်းမယ်ကျားဖမ်းမယ်ဆိုတာစာအုပ်ထည်းမှာပြောကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကလက်တွေ့ သမားတွေပါ) တာကနေ ဆင်ကျောင်း (ဆင်ထိမ်း) လုပ်တဲ့အထိပေါ့
ခမ်ရှင်းရှင်းပြောရ ရင် ဆင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ပေါ့။ ဆင်ဦးစီးတွေရဲ့ မယားတွေဟာ အခြားယောက်ကျားတွေနဲ့ ကာမဖောက်ပြားခြင်းကို ရှောင်ရပါတယ်။မယုံမရှိနဲ့ 
ထားပါတော့ ဆင်ထိန်းတဲ့လူက လူပျို၊ ဆင်ကလည်းအထီး ဆိုရင် တစ်တွဲပေါ့နော် တကယ်လို့ ဆင်ထိန်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ လူပျိုလှည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် နောက်နေ့ ဆင်ပေါ် တက်ရင် ဆင်ကလက်မခံဘူး။ အဲ့ဒါ တယော်ကင်ပွန်း ပေးမှ ပြန်တက်လို့ ရတယ် ( သူမရလို့ ကျေမနပ်ပုံရတယ်)
ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းဆင်တိုင်း မဟုတ်ဘူး ဂွတော့ခပ်ကြကြပဲ ကျွန်တော်က အယူတော့ သိပ်မတိမ်းဘူး ပုံပြင်လို ဖြစ်နေမလားတော့မသိဘူးနော်
ဒါပေမယ့် သူ့ လင်စီးတာက ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးဆိုတော့ မောင်ရှင်ဇာတ်ထုတ်နဲ့ ခမ်ဆင်ဆင်ခင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ပင်လယ်ပြင် မှာ ခုနစ်ရက်ထက် ပိုနေကြတဲ့ရေလုပ်သားတွေဆိုပိုသိတယ် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မိန်းမဟာ ကျမ္မာရေးများလိုက်စားတတ်တယ်ဆိုရင် အဲ့သည်လှေဟာ တော်တော်ဂြိုလ်ဆိုးဝင်တာပဲ
အဲ့ဒါကလဲ လှေတိုင်းမဟုတ်ပြန်ဘူး ဖြစ်တဲ့လှေက ဖြစ်ကို ဖြစ်တယ် မကြူံဘူးတဲ့လူက ယုံကိုမယုံဘူး
အခြားအကြောင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ် ကြုံရင် ဝင်ဟောင်ရသေးတာပ
မိန်းမတွေ မကောင်းဘူးဆိုလို့ ယောကျားတွေမကောင်းတာလေး မရှိကြဘူးလား..
ကြားမိတာကတော့ သင်္ဘော ကမ်းကပ်ရင် သင်္ဘောသားတွေ ကမ်းပေါ် မဆင်းခင်မှာ ကွန်ဒုံ တွေဝေတယ် အလကားလိုချင်သလောက်ရတယ်။ ကြားဘူးတာပြောပါတယ်။ ဒီလို ကြားမိတော့ စပ်စပ်သာတွေးကြရရင်..
လက်တောင် အတို အရှည်ရှိသေးတာဆိုတော့ သူ့စရိုက်နဲ့ သူရှိတာ ဟိုက ညံလို့ ခံရတာ.. အမောင် တယ်ညံသကိုး.. အဲလို ပြောရမလားဘဲ..
မျှမျှ တတ လေး တွေးပေးပါ။
ယောင်္ကျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ်တွေပါပဲ။ အနည်းဆုံးစိတ်နဲ့တော့ဖေါက်ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ ကာယကံမြောက်ဖေါက်ပြန်ဖြစ်သွားတာနဲ့ မဖေါက်ပြန်ဖြစ်တာကတော့ အဲဒီလူရဲ့ စောင့်ထိန်းနိုင်ခြင်း မစောင့်ထိန်းနိုင်ခြင်းစိတ်ခြင်းကွာဟမှု၊ စိတ်ကွယ်ရာကိုရရှိခြင်း မရရှိခြင်း၊ မိသားစုရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုရရှိခြင်းမရရှိခြင်း စတာတွေနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံးစောင့်ထိန်းနိုင်ကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီယောင်္ကျားအလုပ်ခဏခဏပြောင်းတာက အစတည်းကညံ့လို့ နေမှာပေါ့။ ဒါကြောင့်လဲ သားကတောင်ပေါင်းလိမ်လောက်အောင် အကြောင်းရှိလို့နေမှာပေါ့။ ပြီးတော့ သူသာ ခပ်ထက်ထက် အရည်အချင်းရှိရင် ဒီမိန်းမရော ဒီသားရော ဒီလိုလုပ်ပါ့မလား။ သူတို့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စသူတို့ဘဲသိမှာပါ။
ဆူးပြောသလိုဘဲ သင်္ဘောသားတွေအကြောင်းကလဲ ပြောရင်ပြောစရာတွေအများကြီး။
ဘာမှသိပ်မသိပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ လျှာရှည်ခွင့်ပြုပါနော်။
ဒီစာထဲမှာ “ယောင်္ကျား” လို့ရေးထားတာလေးကိုတွေ့လို့ပါ ။ တကယ်တော့ “ယောင်္ကျား” အစား “ယောက်ျား” လို့ရေးရတာလို့ ၁၀ တန်းတုန်းက ကျနော်သင်ခဲ့ရပါတယ်။ “ယောင်ကျား” မဟုတ်ပဲ “ယောက်ကျား” လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုပေါင်းရေးလိုက်တော့”ယောက်ျား” ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာလို့သင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကျနော်သင်ခဲ့ရသလိုပြောတာပါ မှားခဲ့ရင်လည်း ပြန်ပြင်ပေးကြပါလို့။
တမင်ရေးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလူက ယောင်တတ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ယောင်တောင်ပေါင်တောင်မိုလို့ ကျားရှေ့မှာ ဝိသေသန ယောင်သော ဆိုတာ ထည့်ပေးလိုက်ပုံရပါတယ်
မမဆူး ပြောတာမှန်တယ် … မျှမျှတတပေါ့နော် …